Kolontsaina - Howling Pixel
Ny kolontsaina dia ny fitambaran'ny fomban'ny foko iray. Ny siansa mandinika ny kolontsaina dia ny antirôpolojia ary ny siansa ara-tsosialy mikasikan'ny fandinihana ny kolontsaina.
Ny Brezila (Brasil amin'ny teny portogey), na Repoblika Federalin'i Brezila, dia firenena ngeza indrindra ary mivelatra indrindra an'i Amerika latina. Miaraka amin'ny velarantany 8 547 400 km² sy miaraka amin'ny isa-mponina maherin'ny 190 tapitrisa, io ny firenena fahadimy amin'ny lafin'ny velarantany sy amin'ny lafin'ny isa-mponina. Amin'ny 2008, ny Brezila dia hery ara-piharian-karena faha 11 manana PIB 1 572 839 Md USD, eo aorian' Espaina na 2,42%-n'ny PIB-n'izao tontolo izao. Azy ny antsasaky ny velaran'i Amerika Atsimo ary mizara sisin-tany amin'ny firenena rehetra ao Amerika Atsimo afa-tsy i Silia sy ny Ekoadora.
Ny Brezila dia zanatany portogey voalohnay mandritry ny taonjato maro, ankehitriny, io irery no lovan'ny Portogaly any amerika, amin'ny fisehon'ny kolontsaina sy ny teny ofisialy, ny teny portogey.
Firenena katôlika sy miteny portogey ngeza indrindra, mpikambana ao amin'ny CPLP izy. Ny fiteny portogey dia teny voalohany any Amerika Atsimo noho ny demôgrafia brezilianina.
I Damaskosy dia tanàna renivohitr'i Siria. avy amin'ny teny arabo Dimashq, dia firenena lehibe indrindra ao Siria. I Damaskosy no tanàna antitra indrindra mbola ipetrahan'ny mponina. Misy mponina 2,6 tapitrisa izy tamin' ny taona 2004.
I Damakosy dia renivohitry ny kalifaty omaiada tamin'ny taonjato fahafito hatramin'ny taonjato fahavalo. Taorian'ny fandresen'ny dinastia Abasida, dia nafindra tany Bagdada ny renivohitra. Nandritry taonjato faha-13, dia lasa renivohitry ny kalifaty mamaloka, izay nahatonga azy ho tanàna lehibe ary manan-karena amin'ny lafiny ara-kolontsaina ao amin'ny faritra misy azy (Azia andrefana). Nandritry ny taona nanjakan'ny Fanjakambe Osimàna, dia nihakely ny lanjan'i Damaskosy. Amin'izao fotoana izao, i Damaskosy no renivohitr'i Siria. Ary noho ny hareny ara-kolontsaina, izy io no voafidy ho renivohitra ara-kolontsain'ny Arabo ny taona 2008.
Ny Eoropa dia tenenina matetika fa anisan'ny kontinenta enina misy eto an-tany. Izy io dia ny faritra andrefan' Eorazia, faritra avaratry ny kontinentan' Afrô-Eorazia, arakaraky ny fomba fijery. Ny solonanarany dia koe « Tontolo Antitra », satria mifanohitra amin'ny « Tontolo Vao » (ny Amerika). Ao Eoropa dia misy kolontsaina maromaro manana fianjadiana ary lova iraisany.
Ny Eoropa dia kontinenta faharoa kely indrindra eto an-tany amin'ny lafin'ny velarantaniny (10,18 tapitrisa kilometatra efa-mira), na 2%-n'ny velarana tontalin'ny tany na 6,8%-n'ny velarantany tontaliny. Misy firenena fimampolo ao Eoropa, ary ny Rosia no ngeza indrindra amin'ireo na amin'ny lafin'ny isam-ponina na amin'ny lafin'ny velarantaniny, ary ny Vatikana no firenena kely indrindra amin'ireo, na amin'ny lafin'ny isam-ponina na amin'ny lafin'ny velarantany. Ny Vatikana koa no firenena kely indrindra eto an-tany.
Araka ny firenena mikambana, ny anajara ara-isam-ponin' Eoropa dia mety milatsaka ho 7% amin'ny 2050. Kanefa tamin'ny 1900, 25% no anjarany.
Any Eoropa, ny Grisy taloha no toerana nahaterahan'ny kolontsaina eoropeana. Nahazo lanja ny firenena eoropeana tamin'ny taonjato faha 16, indrindra teo aorian'ny fitombohan'ny kôlônialisma. Teo anelanealn'ny taonjato faha 16 sy ny taonjato faha 20, ny hery eoropeana dia nanana zanatany tany Amerika, indrindra tamin'ny taonjato faha 17-18, ny ankabeazann' Afrika, ny Oseania, ary ny singa avaratra sy atsimon' Azia. Ny Ady lehibe rehetra dia niainga avy tao Eoropa, nampahazo lanja ny Etazonia sy ny Vondrona Sovietika teo anivon'ny taonjato faha 20. Nandritry ny Ady mangatsiaka, voazara roa ny Eoropa : ny faritra andrefana dia ao amin'ny OTAN ary ny faritra atsinanana dia entin'ny Fifaneken'i Varsôvia, nampidy ny Fiaro Vy na « Rideau de Fer » amin'ny teny frantsay.
Korea Atsimo dia firenena ao amin'ny faritra atsimon'ny tanjona koreanina, amin'ny faritra avaratra atsinanan'i Azia. Ny renivohiny dia Seoul. Ny anarana ofisialin'ny Repoblikan'i Korea Atsimo dia Repoblikan'i Korea amin'ny teny malagasy ary 대한민국 (Daehan Minguk) amin'ny fiteny koreanina. Miaina ao amin'ny renivohi-pirenena ny Seoul ny 50%n'ny koreanina tatsimo. Anisan'ny tanàna be mponina indrindra eto an-tany ny tanànan'i Seoul, ary ny lahatsoratra sasany dia milaza fa izy io no tanàna lehibe indrindra eto an-tany manaraka an'i Tokyo ao Japana.
Ny lovantsofina dia ny fampitana mitohy ny singan-kolontsaina iray na maro mandritra ny tantara hatramin'ny zava-mitranga mpanorina na hatramin'ny zava-nitranga tamin'ny fotoana lasa lavitra dia lavitra. Izany lova tsy azo tsapain-tanana izany dia mirakitra ny maha izy azy ny vondron'olona iray, ka mety ho izany no namorona ny foko iray. Ny lovantsofina dia fitadidiana ny zavatra izay nisy ka tokony hampitaina amin'ny taranaka mandimby sady hohatevenin'izy ireo. Ny lovantsofina dia mety am-bava na efa voasoratra.
Ao amin'ny fivavahana kristiana dia atao hoe lovantsofina na lovam-pinoana (hoy ny Katolika malagasy) ny fanambaràna mitohy ny Vaovao Mahafaly amin' ny Fiangonana amin'ny alalan' ny fifandimbiasan' ny apostoly (lovam-pinoana apostolika). Raha mampitovy lanja ny lovam-pinoana amin' ny Soratra Masina ny Katolika sy ny Ortodoksa, ny Protestanta kosa dia tsy mandray ho tenin' Andriamanitra afa-tsy izay voasoratra ao amin' ny Baiboly (jereo: Sola scriptura).
Ny Rosia (amin'ny fiteny rosiana : Россия , Rossija?) na amin'ny endrika ofisialy Federasionan'i Rosia (Российская Федерация, Rossijskaja Federacija?) dia firenena ngeza indrindra eo an-tany, manana isam-ponina 142 tapitrisa (araka ny census natao tamin'ny 2007). Eo anelanelan'ny Eoropa jeografika (25,3%n-ny fivelarany) sy ny Azia atsinanana (74,7%). Ny firenena rosy dia manam-pivelarana 17 tapitrisa km2 (in-2 ny Etazonia ary in-30 ny Madagasikara). Manana faritra ora raika ambin'ny folo izy. Ny renivohiny dia Moscou, fiteny Rosy ny teny ofisialy any ary Rouble ny sandam-bola ampiasainy.
Ny tanàna dia vohitra lehibe honenan'olona maro ary efa hary voatra (toy ny làla-migodàna, trano lehibe, kianja malalaka, sns)
Araka ny Firenena Mikambana, ny tanàna dia velarana be olona mipetraka (tokony latsaky ny roanjato metatra ny halaviran'ny trano roa farafahabetsany), izay ahitana ireo varotra, indostria, fianarana, politika, kolontsaina...
Milaza ihany koa ny FM tamin'ny 2008 fa mahery ny dimampolo isan-jaton'ny olombelona no miaina any ambonivohitra.
52.23700°N 21.01467°E﻿ / 52.23700; 21.01467
Varsôvia (fiteny poloney : Warszawa) dia renivohitr'i Polonia, ny isam-poniny dia 1,7 tapitrisa mponina eo ho eo (1 726 581 (2014)).